IGreenlands Barn kuhambo oludala loMlambo iTone
IGreenlands Barn ikwindawo entle ezolileyo ngaphandle koMlambo iTone. Ukusuka emnyango ungahamba ecaleni komlambo, uye phambili ukuya kumanqanaba eSomerset okanye wenze isekethe kwi-pub yendawo kwilali elandelayo. Le barn ilula kwaye inomoya inekhitshi elikhulu lokutyela & negumbi lokuhlala, igumbi lokulala elikhulu, igumbi lokuhlambela elibanzi, intendelezo ebiyelwe ngodonga kunye nonxweme lomlambo wabucala. Kukho iibhayisekile zeentaba kunye nephenyane lomntu o-2 onokusetyenziswa ngexesha lokuhlala kwakho. Iidolophu ezinembali, amaphandle okanye ukuphumla nje ngesitovu esibaswayo kukulindile.
Ibhadi yinxalenye yefama endala eyayikade iyinxalenye yenkqubo eHam Lock. I-Coalharbour ngaphaya kwebhulorho yokunqunyanyiswa yathatha amalahle, iHam Mills yaguba umgubo kwaye isenayo ivili lamanzi elisebenzayo, iHam Lock cottage yayilawula iqhaga kunye neFama yaseOld Ham Wharf kunye neeshedi ezimbini zaziphambi kwevenkile kwabo bathengayo umgubo okanye abathathayo. iimpahla ngokujonga ngeenqanawa ezilayishwe kwiTowuni. Ungayibona intsalela yale nto kwizakhiwo kwaye ukonwabele ukuma komlambo kunye nentabalala yezilwanyana zasendle ezibuyisele indawo.
5.0 · Izimvo eziyi-75
Sikufutshane kuManqanaba eSomerset, eGlastonbury, eSitalatweni, eBath, eClark Village Shopping, Bridgwater Carnival, The Quantocks, Exmoor, The Bridgwater to Taunton Canal indawo entle kakhulu yezilwanyana zasendle kunye nokuhamba. Sisekhaya kuMnyhadala weQakamba weKings College, imidlalo yaseSomerset County Ground kwaye sinyuka nje ngendlela esuka kwiKlabhu yombhoxo yaseTaunton. Ukuba uya kumtshato wasekhaya eMaunsel House, eHestercombe, eHuntstile Organic Farm, Mount Somerset, Woodlands Castle okanye naziphi na iilali zalapha ekhaya ndonwabile ukunibeka kwindawo ukuba ndinako kwaye ndincedise ekulungiseleleni iteksi yakho. khwela ubuye.
Yiholide yakho, ngoko ke uya kuba neendawo zokuhlala kunye neendawo zakho. Uza kundibona ndisenza umbumbi, ikakhulu ndicheba ingca okanye okufanayo. Ukuba unethamsanqa ndiza kukuphathela iicucumber ezintsha, iitumato kunye neecourgettes ezisuka kwisitiya sam semifuno ngaphaya kwendlela. Andingomntu ovuka kwangoko kwaye ngaphandle komculo omnandi womculo womphefumlo (onokuthi uwusebenzise ukukhomba indawo endikuyo egadini okanye ihektare ngaphaya kwendlela), awuyi kundiva. Ndiyakwazi ukuphendula nayiphi na imibuzo ngefowuni, umbhalo, i-imeyile, umthunywa.
Yiholide yakho, ngoko ke uya kuba neendawo zokuhlala kunye neendawo zakho. Uza kundibona ndisenza umbumbi, ikakhulu ndicheba ingca okanye okufanayo. Ukuba unethamsanqa ndiza kukuph…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Taunton